समाजवाद | Ratopati
समाजवाद : कसरी र कहिले ? access_timeफागुन २२, २०७७
१. परिचय यस कार्यपत्रका दुई वटा उद्देश्य छन् । पहिलो, “समाजवाद कसरी ?” भन्ने प्रश्न अन्तर्गत संसदीय लोकतन्त्र र समाजवादको सम्बन्धको चर्चा गरिने छ । दोस्रोमा, “समाजवाद कहिले ?” भन्ने प्...
समाजवाद र नवमानवको सिर्जना access_timeअसोज २२, २०७६
यो ऐतिहासिक लेख चे ग्वेभाराले कार्लोस क्वीजानोलाई पत्रको रुपमा लेख्नुभएको थियो । कार्लोस उरुग्वे नामक ल्याटिन अमेरिकी देशको राजधानी मोन्टेभिदेओबाट प्रकाशित हुने वामपन्थी साप्ताहिक पत्रिका Marcha का सम्पादक थिए । यो लेख उहाँले संयक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गरेपछि भएको उह...